झाक्री जेल गएपछि श्रीमती रुदै मिडियामा,”छोराछोरीको बिजोक भयो अब म कहाँ जाउ? न्याय पाइएन,घरमा खानेकुरा छैन भाडा कसरी तिर्नु भन्दै रोएको भिडियो हेर्दा कस्को मन रुदैन होला (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
झाक्री जेल गएपछि श्रीमती रुदै मिडियामा,”छोराछोरीको बिजोक भयो अब म कहाँ जाउ? न्याय पाइएन,घरमा खानेकुरा छैन भाडा कसरी तिर्नु भन्दै रोएको भिडियो हेर्दा कस्को मन रुदैन होला (भिडियो सहित)
ScotNepal February 25, 2021
झाक्री जेल परेपछी सबै बिरामीहरुको बिजोक भएको छ । केही समय अघिदेखि मोरङमा धेरै युवतीहरु बिरामी पर्दै मुर्छा पर्न थालेपछी धेरै झाक्रीले चिन्ता बसे तर कसैले पत्ता लगाउनै सकेनन । उल्टै झाक्री नै ढलेपछी झनै गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको र अन्त्यमा ताप्लेजुङका झाक्री कृष्ण बिकलाई बोलाएर चिन्ता बस्न सुरु गरेर चार दिन चार रात नसुती धामी बसेर ढ्याङ्रो बजाएपछी अन्त्यमा छ बर्ष पहिले मोटरसाइकल दुर्घटनामा निधन भएका जीवन राईको चिहान खनेर हेर्नुपर्ने भनेर झाक्रीले भनेपछी सुरक्षाकर्मी र गाउले बुद्धिजिबि सहित करिब दुई सय मानिसहरुले रातको 12 बजे चिहान खने । सुरुमा छिटो पत्ता लगाउनुपर्छ भन्दै झाक्रीलाई नै हातपात गरेको समाजले चिहानमा हेर्दा कसैले नसोचेको दृश्य देखिएपछी धामीलाई नै माफी मागेर सम्मान समेत गरेका थिए । आत्मा पसेर युवतीको टाउको घुम्ने, खुट्टा बटारिने जस्ता डरलाग्दा क्रियाकलाप देखिएपछि सबै डराएर राती सुत्न समेत नसकेको गाउलेहरुले बताए । झाक्रीले सबै कुरा निर्मुल पारेको बताएर सबै खुशी बनाएका थिए । भारतको एम्स हस्पिटलमा बिगत लामो समयदेखि उपचाररत बिरामी करिब ५० लाख खर्च गर्दा निको नभएको बिरामी ५ मिनेटमा निको बनाएर बिज्ञानलाई नै चुनौती समेत दिएका थिए । आमाबाबुले रुदै सुरुदेखिको सम्पुर्ण नालीबेली बताएको भिडियो सुपर अनलाइन टिभिमा हेर्न सक्नुहुनेछ ।
केहि दिन अगाडी झाक्रीको थानमा एक युवक आएर थानमै थुकेर आफ्ना शरीरमा भएका कपडा खोलेर झाक्री र माताहरुलाई थुकेर सारै नराम्रो हर्कत गरेपछी केही नगरी त्यहाबाट केही नगरी फर्काएपछी पुन दोश्रो पटक त्यहा ती युवा र उनका दाजुसहित पुगेपछी फेरि त्यस्तै हर्कत गर्न थालेपछी झाक्री र माताहरुले झाक्रीको विधि अनुसार खुकुरी नचाउदै माताहरुले कुटपिट गरेको भिडियो सबैमाझ आएको थियोे । त्यससँगै झाक्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । झाक्रीलाई फसाउन यस्तोसम्मको षड्यन्त्र गरियो भन्दै माताहरुले यस्तोसम्म सुनाए कि सुनेर सबै छक्क परे । ती युवाले थानमै लुगा खोलेर यस्तोसम्म हर्कत गरेको खुलासा भएको छ । झाक्रीलाई षड्यन्त्र गरि फसाएको भन्दै गाउँ नै झाक्रीको पक्षमा उर्लीएको छ । त्यो दिन युवाले थानमै यस्तोसम्मको हर्कत गरे कि सबै चकित नै बने । आज आफ्नो छोरो जेल परेपछि ताप्लेजुङबाट रुदै आमाबुबा बेलबारी आइपुगेका छन ।झाक्रीकी श्रीमती दुई बच्चा बोकेर रुदै मिडियामा आएकि छिन । उनले झाक्रीको बिगतदेखि आजसम्मको सम्पुर्ण कथा सुनाउदा सबैका आखामा आँसु नै आएको छ । बोल्दाबोल्दै रुन थालेकी श्रीमतीको रुदा रुदा आँसु नै रित्तीएको छ । आमाबुबाले रुदै यस्तोसम्म सुनाए कि सबैले आँसु थाम्न सकेनन । तलको भिडियोमा हेर्नुहोला तपाई पनि रुनुहुनेछ । दुखी बनेकी श्रीमतीले यस्तोसम्म भनेको सुन्दा कस्को मन रुदैन होला तलको भिडियोमा हेर्नुहोला |
खोलाभित्रको ढुङ्गा निकालेर बेच्दै परिवार पाल्ने सुन्दरीको जादुमय स्वर,गरिबीमा लुकेको...